हत्केलामा चन्द्रमा आकार बन्छ ? यस्ता व्यक्तिसँग हुन्छ अद्भूत शक्ति – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Intresting/हत्केलामा चन्द्रमा आकार बन्छ ? यस्ता व्यक्तिसँग हुन्छ अद्भूत शक्ति
काठमाडौँ । लगभग सबै मान्छेको हत्केलामा चन्द्रमा आकार बन्छ। दुबै हात जोड्नुहोस तपाईंको हत्केलामा पनि बन्छ होला। आधा वा पुरा चन्द्रमा बन्छ होला। के तपाईं यो अधुरो चन्द्रमाको बारेमा जान्नुभएको छ ?जसले गर्दा नै तपाईंको अहिले को सुख र दुस्खको बर्तमान अवस्था रहेको छ। आफ्नो २ वटै हात आपसमा जोड्नुहोस र हेर्नुहोस माथिको रेखा जोडीएर कस्तो आकार बनाउछ ?
यदी आधा चन्द्रमा जस्तो देखियो भने पिर नगर्नुहोस । अधुरो चन्द्रमा जस्तो आकार बन्ने मान्छे साथी हरु पर्ती पूर्ण बफादार हुन्छन यती मात्र होइन तपाईंमा यस्ता खुबी हुन्छन जुन अरु मान्छे त्यो पाउन लोभिने गर्छन्।जसको हत्केला मा यस्तो आधा चन्द्रमा बन्छ उनिहरुको दिमाग धेरै नै राम्रो हुन्छ। उनिहरुको स्मरण सक्ती नसोचेकै राम्रो हुन्छ। यिनीहरु धेरै वर्ष पहिलाका कुराहरु पनि सजिलै सम्झन सक्छन।
अधुरो चन्द्रमा भएकाहरु साथीको लागि पूर्ण बफादार हुनुको साथै दिमाग भएका त हुन्छन नै तर यिनीहरु लाई निकै शान्ती मन पर्छ। यिनीहरु आफ्नो उमेरकासँग त मिलनसार हुन्छन नै बुढाबुढी सँग समय बिताउन पनि रमाउँछन।यिनीहरु शान्ती मन पराउछन नै तर रिसाउन कसैले भेट्दैन। यिनीहरुलाई छिटो छिटो रिश उट्छ र शांत पनि उत्तिकै छिटो हुन्छन। कहिले पनि काम गर्न अल्छि गर्दैनन त्यस कारण पनि यीनिहरु सफल हुन्छन।
२२ घण्टा ब्याट्री टिक्ने ल्यापटप अब नेपालमा : कति पर्छ मूल्य ?
रातो खुर्सानी खाने मानीसको आयु लामो आजै देखी बानी बसाल्नुहोस रातो खुर्सानी खाने
यस्ता युवती संग विवाह नगर्नु भाग्यनाश हुन्छ ,दुःख पाइन्छ : चाणक्य